जानकारी - साप्ताहिक
जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ, कोरोनाले त्यति धेरै असर गर्दैन । ‘लक डाउन’को बेला घरभित्रै बसेर कसरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने त ? मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले दिएको सुझाव यस्तो छ ः पुरा पढ्नुहोस्
रोगको लक्षण नदेखिए पनि संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको शरीरमा किटाणुहरू प्रवेश गरेको हुन सक्छ भनेर छुट्टै राख्नुलाई ‘क्वारेन्टाइन’ भनिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र ११, २०७६
अहिले बालबालिकाहरु स्कुल बन्द भएर वा परीक्षा स्थगित भएर घरमै बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको रेखदेख गर्न निकै जरुरी हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले बालबालिकाको तनाव थाहा पाउने एवं सावधानी अपाउनका लागि ‘गाइडलाइन’ जारी गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, चैत्र ९, २०७६
कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सा विज्ञानले आफूमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनु र सुरक्षित रूपमा रहनुलाई नै बच्ने मुख्य उपाय बताइरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
कोरोनावाट बच्ने उपाय बताउदैं सम्बन्धित चिकित्सक (भिडियो)
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २७, २०७६
अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणवाट बच्ने धेरै अपत्यारिला उपायहरु समाजिक संजालमा ब्याप्त भएपछि साप्ताहिले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, टेकुका प्रवक्ता एवं प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बास्तोलासंग भेटेर कोरोना भाईरसको संक्रमणवाट बच्ने उपाय, यसको रोकथामका उपायहरु बिषयमा भिडियो तयार पारेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
मिचिमिची हात धोऔं !
कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल छ । तर अहिले नै नेपालमा आइसक्यो, फैलियो, खत्तम भैसक्यो भनेर आत्तिएको देखिन्छ । तर आत्तिहाल्नु पर्दैन । यो भाइरस सक्रमित बिरामीले हाँछ्यु गर्दा, खोक्दा निस्केका छिटा अर्को व्यक्तिले छोयो र हात नधोई नाक, आँखा, मुखमा छोयो भने सर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
बिकेश कविन, माघ १८, २०७६
हामी धेरैजनाले भारतको प्रसिद्घ कम्पनी ‘पार्ले’को ग्लुकोज बिस्कुट ‘पार्ले–जी’ कति खायौं, त्यसको कुनै हिसाबकिताव नै छैन । हामीमध्ये कोही जिनियस भए होलान्, कोही जिनियस बन्ने मार्गमा होलान् । यो लेखमा ‘पार्ले–जी’ बिस्कुटको इतिहासदेखि वर्तमान समयसम्मका विविध किस्साहरू समेट्ने प्रयत्न गरेको छु । पुरा पढ्नुहोस्
अदुवा सेवन स्वास्थ्यका दृष्किोणले निक्कै फलदायी मानिन्छ । अदुवामा भएको न्यूट्रीएन्ट्सले कयौँ स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन मद्दत गर्छ । दिनहुँ आफ्नो खानामा एक टुक्रा अदुवा सेवन गर्नेले मानिसलाई धेरै फाईदा हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
तिहारमा मिठाईको महत्व स्वभाविक रूपमा अन्य चाडपर्वको तुलनामा बढी हुन्छ । नेपाली समाजमा तिहार र मिठाईलाई नङ र मासुको जस्तै सम्बन्धका रूपमा लिइन्छ । तिहारमा रंग र बत्तीको जस्तो महत्व मिठाईले पनि राख्दै आएको छ । पहिले–पहिले तिहारमा मात्र मिठाई खाने नेपालीहरू मिठाई पसलको संख्यामा वृद्धि, बदलिँदो परिवेश तथा भारतीय मिठाई नेपाल भित्रिन थालेपछि भने परिवर्तित हुन थालेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन २०, २०७६
अधिकांश चिकित्सकदेखि स्वास्थ्य सल्लाहकारहरूले खसीको मासु नखान सल्लाह दिँदै आएका छन् । खसीको मासु चिल्लो हुन्छ, रातो मासु खानु हुँदैन यो खायो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ आदि इत्यादि । यी कुरालाई वास्ता नगर्ने हो भने खसीको मासु अरू केही जनावरको मासुको तुलनामा बढी गुणकारी छ । पुरा पढ्नुहोस्